NADHII GAMMADAA GOOTA IJA BARBADAA – Ayyaantuu Online
Via Oromiyaa Harmeekoo, August 28, 2018
Jaal Nadhii Gammadaa Maqaan dhalootaa isaa Qaasim Hajii Usmaan Roobaa jedhama.Maqaan itti beekkamu maqaa Qabsoo Nadhii Gammadaa jedhamuun beekkama. Nadhiin bara 1955 kutaa Arsii Ona
#Zuway Dugdaa keessatti Abbaa isaa Haaji Usmaan Roobaafi Haadha isaa Aaddee Amiinaa Borsee irraa dhalate.
Jaal Nadhii Gammadaa obboleewwan dhiiraa saddeeti fi dubaraa 4 waliin dhalate.
Jaal Nadhiin barnoota isaatin sadarkaa tokkoffaa irraa hanga yuunivarsitiitti barataa cimaa ture. Qormaata Kutaa 12ffaa irratti qabxii olaanaa galmeessudhaan yuunivarsitii #Finfinneetti ramadamuun ogummaa fayyaa barnoota faarmaasii barachaa ture. Barnoota isaa waggaa 1ffaatti qabxii olaaanaa galmeessudhaan barnoota waggaa 1ffaa akkuma xumureen roorroo uummata Oromoo irratti rawwatamu jibbuun barnoota isaa addaan kutuun osoo maatii isaatti hin deebi’in bara 1986 ABOtti makame.
Nadhiin bara1993 wal ga’ii ABO irratti hirmaachuf waardiyoota isaa ja’a (6) wajjiin osoo gara iddoo #Bookee-27 jedhamuutti deemuuu bakka #Asakoojedhamu tan daangaa Arsiifi Harargee jidduutti argamtutti butamee achi buuteen isaa dhabame. Nadhiin goota sammuu qaroo kan yoo dubbatu haasawa isaa jechoota akka rasaasaatti onnee nama kutu kan sagalee onnattummaafi kutannoon dubbatu saniin hedduu beekkama. Akkuma sagalee haasawa isaa Nadhiin goota murannoofi kutannoo dhugaa qabuudha.Arramee jechoota muraasa dhaadannoo gatii qabdu tahu kan haasawa isaa humna qabeessa keessaa walitti guureen haa yaadannu.
“Biyyakeenya jaalannu nama wajjiin qooddanna, feenu immoo akka barbaadnetti bulfachuun mirgakeenya!” “Osoo alagaan biyya keenyarratti nu bulchuuf lafa dhiituu,kanhidhatee muratee dhaadatu nuti ammoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqisuhin jiru!” “Hiree Ummata Oromoo kan murteessu Ummata Oromooti malee anaatu sii beeka karaa kana deemtu malee kannuun jedhuufi kan afaan qawweetiin nu doorsisu jiraatu Ummanni keenya fudhachuuf qophii miti!” jedhuudha!”
“Seenaa Abboota keenyaa kan Aanooleetti dhumanii san jiraachisuun biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti, Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo Ummata Oromootiif dhaabbataniitti galchuu qofaani!” “Hundi Keenyaahuu Ummanni Oromoo bakkayyuu harka wal qabannee waliin dhaabannee waan warri Aanooleetti wareegamaniif sangatii itti godhuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu!”
“Oromoon tokko.Amantiin addan baahu. Oromoon gosaan addan bahu.Lagaan addan bahu. Gaaraan addan bahu. Kan Oromoo adda qooduuf tattaafatu haa badu!” Biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha.Biyya Oromoo irratti Oromoo malee namni biraa murteessuu hin danda’u. Kan warra biraa nurratti murteessisuu dhidhiibu haa badu!”…
Jaal Nadhii Gammadaa akkuma barnootaa maatii isaa biraa manaa bahetti barnoota isaa addaan kutuun roorroo saba isaa irra gahaa jirtu sammuun isaa taa’ee ilaaluu waan dadhabeef qabsoo Oromoo ABO dhaan gaggeeffamutti makamuun hanga har’aatti achi buuten isaa dhabame. Jaal Nadhii Gammadaa naannoo Tigraay keessatti hidhamee dararamaa jira kan jedhuu fi Nadhiin ajjeefameera kan jedhu yaadota qabatamaa hin taanetuu jira.
Uummanni Oromoo goota sabaaf jedhee achi buuten isaa dhabamte barbaadachuun dirqama Oromummaati.
GOOTA IJA BARBADAA
SABA KOO NUUF BARBAADAA.